IGenesis 28 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
1 UIsakeUIsake wambiza uYakobiuYakobi, wamsikelela, wamwisela umthethoumthetho, wathi kuye, Uze ungazeki mfazimfazi ezintombini zakwaKanan.
2 Suka uye ePadan-aram, endlwini kaBhetuweli unyokokhulu, uzeke khona umfazi ezintombini zikaLabhan, unyokolume.
3 Ngamana uThixo uSomandla wakusikelela, wakuqhamisa, wakwandisa, ukuze ube sisikhungu sezizwe;
4 akunike intsikelelo ka-Abrahamka-Abraham, wena nembewu yakho ndawonye nawe, ukuze ulidle ilifa ilizweilizwe lokuphambukela kwakho, elo uThixouThixo walinika uAbraham.
5 UIsakeUIsake wamndulula ke uYakobiuYakobi; waya ePadan-aram, kuLabhan unyanaunyana kaBhetuweli umAram, umnakwabo boRebheka, unina booYakobi noEsawu.
6 UEsawuUEsawu wabona ukuba uIsakeuIsake umsikelele uYakobiuYakobi, wamndulula ukuba aye ePadan-aram, azeke khona umfazi; ekumsikeleleni kwakhe wamwisela umthethoumthetho wokuthi, Uze ungazeki mfazimfazi ezintombini zakwaKanan;
7 noYakobi umphulaphule uyise nonina, waya ePadan-aram.
8 Wabona uEsawuuEsawu ukuba iintombiiintombi zakwaKanan azifunwa nguIsake uyise;
9 wasuka waya uEsawuuEsawu kuIshmayeli, wazeka uMahalati, intombi kaIshmayeli, unyanaunyana ka-Abrahamka-Abraham, udade boNebhayoti, phezu kwabafazi bakhe, wangumkakhe.
10 Waphuma ke uYakobiuYakobi eBher-shebha, waya kwaHaran.
11 Wathi qatha ndaweni ithile, walala khona, kuba belithshonile ilangailanga. Wathabatha kumatye aloo ndawo, wabeka phantsiphantsi kwentloko yakhe, walala kuloo ndawo.
12 Waphupha ebona ileli imisiwe emhlabeni, intlokointloko yayo iye yafika emazulwini; nanzo izithunywa zikaThixo zinyuka, zisihla ngayo;
13 nanko uYehova emi phezu kwayo, wathi, NdinguYehova, uThixouThixo ka-Abrahamka-Abraham uyihlo, uThixouThixo kaIsake. IlizweIlizwe elo ulele kulo, ndiya kulinika wena, nembewu yakho;
14 imbewuimbewu yakho ibe njengothuli lomhlaba, uphangalale, usinge entshonalanga, nasempumalanga, nasentla, nasezantsi, zisikelelwe ngawe nangembewu yakho zonke izizwe zehlabathi.
15 Yabona, ndinawe; ndiya kukugcina naphi apho uya khona, ndikubuyisele kulo mhlaba; ngokuba andiyi kukushiya, nidide ndikwenze oko ndikuthethileyo kuwe.
16 Wavuka uYakobiuYakobi ebuthongweni bakhe, wathi, Kunjenje ke, uYehova ukho kule ndawo, kanti mna bendingazi.
17 WoyikaWoyika, wathi, Asikuko nokuba iyoyikeka le ndawo; yindlu kaThixo le, ayinto yimbi; lisango lamazulu eli.
18 Wavuka uYakobiuYakobi kwakusasa, walithabatha ilityeilitye abelibeke phantsiphantsi kwentloko yakhe, walimisa lasisimiso, wathulula ioli phezu kwalo.
19 Wathi igamaigama laloo ndawo yiBheteli, nangona beliyiLuzi, igamaigama laloo mzi ekuqaleniekuqaleni.
20 Wabhambathisa ngesibhambathiso uYakobiuYakobi, esithi, Ukuba uThixouThixo utheuthe waba nam, wandigcina kuyo le ndlela ndiyihambayo, wandinika isonkaisonka ndadla, neengubo ndambatha,
21 ndabuyela endlwini kabawo ndinoxolo: uYehova woba nguThixonguThixo wam,
22 neli litye ndilimisileyo lasisimiso loba yindlu kaThixo; neento zonke othe wandinika, ndokunika isishumi sazo.
Exploring the Meaning of IGenesis 28